September 2021 - Babal Khabar
Sep302021 by बबाल खबरNo Comments
२० वर्षकी युवतीको फोटो देखाएर ४५ वर्षीया महिलासंग विवाह, बेहुलीलाई देखेपछि टाप कसे
पुरा बखर, भनिन्छ विवाहमा केही कुरा बढाएर बोलिन्छ । हुनेवाला बेहुला र बेहुलीको बारेमा राम्रा कुराहरुको मात्र बखान गरिन्छ । तर भारतको यूपीको इटावामा भने एक युवकलाई २० वर्षकी युवतीको फोटो देखाएर एक ४५ वर्षीया महिलासंग विवाह गराइन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बेहुला बेहुलीलाई मण्डपमा देखेपछि टाप कसेका छन् । विवाह भन्दा पहिले, तस्वीर एक २० वर्षीया युवतीको देखाइएको थियो। जब केटाले बिहेका लागि हुन्छ भन्यो, तब दुई बच्चाहरुकी आमालाई मण्डपमा बसाइयो । मण्डपवाट टाप कसेका बेहुला सिधै प्रहरी कार्यालय पुगे । उनले आफुलाई ठूलो धो का भएको भन्दै उजुरी दिए । ति युवकको नाम शत्रुघ्न सिंह हो । उनलाई २० वर्षीया युवतीको तस्वीर पहिलो पटक उनलाई देखाइएको थियो र उनी आफैंले ३५ हजार रुपैयाँ अग्रिम पैसा पनि लिएकी थिइन् । तर जब ती युवक विवाहको दिन मन्दिर पुगे, उनलाई थाहा भयो कि उनी एक ४५ बर्षीया महिला स
महिलाहरु यस्ता पुरुष सँग यौ’ न सम्बन्ध राख्न चाहदैनन्…
पुरा खबर, तपाई कसैलाई आफु प्रति आकर्षित गर्न के गर्नु हुन्छ । मेकअप, राम्रो पहिरन वा अन्य केहि रु हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार कसैलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न तथा आफ्नो पार्टनरलाई रिझाउन तपाईको सुग'न्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखाएको छ । कसैलाई ‘से'क्सुअ'ल्ली अ'ट्रेक्ट’ गर्न पैसा, सुन्दरता तथा फि'गर लगायत कुरा तपाईको सुगन्धको अगाडि सब बेका'र हुन सक्छन्। एक्स्ट्रा मेरिटल डेटि'ङ साइट भिक्टोरिया मिलनले १२ देशका ती मानिसमाथि अनुस'न्धान गरेको थियो, जो आफ्नो पार्टनरसँग ची'ट गरिरहेका थिए। उनीहरुको उक्त धोकेबाजीको कारणबारे सोध्दा हैरा'न गर्ने करण सामुन्ने आयो। उनीहरुले भनेका कुराहरुबाट थाहा हुन्छ कि तपाईको श'रीरको सुग'न्धको कति ठूलो भूमिका हुन्छ। अध्ययनमा सामेल ७८ प्रतिशत महिलाले शरी'रबाट नराम्रो ग'न्ध आउने पु'रुषसँग रात बिताउनु भन्दा उनीहरु एक्लै घर जान मन पराउने बताए। तर पुरु'षहर
खेतमा ब्रोकाउली टिपेको तलब १ करोड रुपैयाँ, दिनको ८ घण्टा काम, हप्तामा २ दिन विदा
पुरा खबर, खेतमा ब्रोकाउली टिप्ने मजदुरलाई १ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने कुरा सुन्दा हामी अचम्ममा पर्छौं । तर, यो साँचो हो । दिनमा ८ घण्टा काम र हप्तामा २ दिन विदा लिएर समेत ब्रोकाउली टिप्ने मजदुरले वर्षमा १ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो अफर बेलायतको एक कम्पनीले दिएको हो । बेलायती अखबार डेली एक्सप्रेसका अनुसार इङल्याण्डको लिंकनशायरको यो कम्पनीले कर्मचारीको अभाव भएपछि तरकारी टिप्ने मजदुरलाई मोटो रकम अफर गरेको हो । टिएच क्लेमेन्ट्स नामको यो कम्पनीले मजदुरहरुलाई प्रतिघण्टा ३० पाउण्ड अर्थात ४ हजार ८ सय नेपाली रुपैयाँ अफर गरेको छ । यस हिसाबले दिनमा ८ घण्टा काम गर्दा मजदुरले २४० पाउण्ड कमाउँछन् । हप्तामा २ दिन विदा लिएर ५ दिन मात्र काम गर्दा पनि उनीहरुले हप्तामा १२०० पाउण्ड कमाउँछन् । वर्षका कूल ५२ हप्ता काम गर्दा उनीहरुले ६२ हजार ४ सय पाउण्ड कमाउँछन् जुन नेपाली १ करोड रुपैया
पुरा खबर, यसै वर्ष युभेन्टसबाट म्यान्चेस्ट युनाइटेड आएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बुधबारको खेलमा क्लबका लागि महत्वपूर्ण गोल गरे। उनले इन्जुरी समयमा गरेको गोलसँगै युनाइटेडले भिल्लारियललाई २-१ गोल अन्तरले हराउन सफल भयो । यसैबीच रोनाल्डोले प्रेमिका जर्जिना रोद्रिगेजसँग विवाह गर्लान् कि नगर्लान् भनेर कौतुहलता बढेको छ । जर्जिना स्पेनिश मोडेल हुन् । हालै उनलाई रोनाल्डोसँग विहे गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? भनेर सोधिएको थियो । होस् भन्ने चाहन्छु तर यो कुरा ममाथि मात्रै मात्रै भर पर्दैनु, जर्जिनाले हाँस्दै प्रश्नको उत्तर दिएकी थिइन् । यता रोनाल्डोले अहिलेसम्म विवाहको प्रस्ताव गरेका छैनन् । विवाह नभए तापनि दुबैजना म्यान्चेस्टरमा चार सन्तानसँगै खुसीसाथ बसिरहेका छन् । रोनाल्डोका चार सन्तान छन् । जर्जिना छोरी एनालाकी आमा हुन् । क्रिस्टियानो जुनियर उनका जेठा छोरा हुन् । २०१० मा जन्मिएका जुन
Sep292021 by बबाल खबरNo Comments
ह’नि’मुन मनाउन होटल गएका थिए जोडी, भयो यस्तो घ’टना !
पुरा खबर, विवाह पछि, ह'नी'मून मनाउन गएका एक जोडी को सपनाहरु च'कनाचूर भयो जब उनीहरु अलग बस्न बा'ध्य भए। दम्पती ह'नीमू'न को लागी विदेश गएका थिए, तर त्यहाँ उनीहरुलाई केहि यस्तो भयो कि उनीहरु एक अर्का बाट अ'लग भए। ती महिलाले ह'नीमू'नमा यस घट'नाको सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। मिरर युकेु का अनुसार, २७ वर्षीय एमी र ३३ वर्षीय अल्बर्टो, किस्विक, लन्डनको निवासी हुन्, भर्खरै विवाह गरेका थिए। विवाह पछि, उनीहरु हनी'मूनको लागी बार्बाडो'स, आयरल्याण्ड पुगे। तर त्यहाँ पुगेपछि उनीहरुले सोचेजस्तो अवस्था भएन । लन्डन छोड्नु भन्दा पहिले दुबै जनाले को'भिड को पीसी'आर परीक्ष'ण गरेका थिए जसको रिपोर्ट ने'गेटिभ आएको थियो। तर जब उनी ब्रिजटाउन बिमानस्थलमा आइपुगे, उनको फेरी परिक्षण गरियो। यहाँ अल्बर्टो को परीक्षण रि'पोर्ट नका'रात्मक आयो, तर एमी को रिपोर्ट सका'रात्मक आयो। जस पछि नव विवाहित दुलही एमी लाई उनको होटल
पुरा खबर, विश्वको धेरै हवाई दु,र्घटना हुने मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्छ। एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक पनि धेरै छ। डाँडाकाँडाले घेरेको राजधानी काठमाडौंमा अवतरण गर्ने क्रममा कहिले पहाडी डाँडामा ठोकिएर विमान दु,र्घटना हुने गरेको छ। नेपालमा मात्र हैन विश्वमा प्लेन दु,र्घटना निकै हुने गर्छ। जसका कारण धेरै हवाई कम्पनी घाटामा गएका छन् अनि धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। तर हामी कुरा गर्दा गर्दै यो सम्झिन पुग्छौँ कि प्लेनमा किन प्यारासुट राखिँदैन र यात्रुको ज्यान किन जोगाइँदैन ? यस्तो प्रश्न धेरैले गर्ने गरेका छन्। यस्तो छ कारण : १.सबै मानिसलाई प्यारासुट चलाउन नआउनु: प्यारासुटमा उड्न एक बिशेष किसिमको तालिम गरेको हुनु पर्छ। नत्र त्यो मानिसको दु,र्घटना हुन पनि सक्छ। अब तपाई आफैँ भन्नुहोस् कि प्लेनमा यात्रा गर्ने सबै प्यारासुट चलाउन आउने हुदैनन् र यहाँ प्यारासुट राखिँदैन।
तरकारीको मूल्य आकाशियो, केको भाउ कतिले बढ्यो ?
पुरा खबर, दुई सातायता तरकारी भा,उ अचाक्ली बढेको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै तरकारीको भा,उ बढेको हो। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका अनुसार बजारमा केही तरकारीको मूल्य शतप्रतिशत बढेको छ। भदौको अन्तिम साता थोकमा प्रतिकेजी १५/२० रुपियाँ रहेको गोलभेँडा असोजको दोस्रो साता ३८ रुपियाँ पुुगेको छ भने आलु रा,तो ४५ रहेकोमा अहिले ६० रुपियाँ पुगेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुुसार तुनेबोडी प्रतिकेजी ६५ रुपियाँबाट १३० रुपियाँ, घिरौँला प्रतिकेजी ४५ बाट ८० रुपियाँ घिउसिमी ७५ रुपियाँबाट १३० रुपियाँ भिन्डी प्रतिकेजी ४० बाट ७० रुपियाँ पुुगेको छ। त्यसै सुुकेको प्याज प्रतिकेजी ४५ रुपियाँबाट थोकमै ५५ देखि ५८ रुपियाँ पुगेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार बजारमा दैनिक आठ सयदेखि एक हजार मेट्रिक टनसम्म तरकारी भित्रिएको छ। समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले बजारमा तरकारीको आयात कम भएर नभई उत्पादनको ला
२० लाखमा तयार भएको वडा कार्यालय भवन ! २० लाख लाग्ला यो भवनलाई ? प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुरा खबर, आज हामिले एउटा अचम्म को फेसबुक मा भेटिएको फोटो प्राप्त गरेका छौ । यो फोटो माथी लेखिएको छ । एउटा सानो भवन लाई बनाउदा नेपालि रुपैया बीस लाख लाग्यो भनेर पोस्ट आएको छ । त्यो पोस्ट को तल रहेको कमेन्ट मा धेरै भन्दा धेरै गाली गलौज आएको थियो । कमेन्ट मा लेखिएको छ । जाबो यो भवन बनाउदा बीस लाख नहुने कुरा, होईन यो भवन हो कि घर हो ?, यो पुरै ठगै ठग ले भरिएको देश मा जे मन लाग्छ तेई गर्छ ।, यो भवन म एक लाख मा बनाईदिन्छु जस्ता धेरै कमेन्ट हरु आएका छन । कमेन्ट मा लेखिएको छ । जाबो यो भवन बनाउदा बीस लाख नहुने कुरा, होईन यो भवन हो कि घर हो ?, यो पुरै ठगै ठग ले भरिएको देश मा जे मन लाग्छ तेई गर्छ ।, यो भवन म एक लाख मा बनाईदिन्छु जस्ता धेरै कमेन्ट हरु आएका छन । तर हामिले पनि यो फोटो हेर्दा लाग्छ यो बीस लाख मा बनेको चै पक्कै होईन भन्ने त्यो सानो भवन ले देखाएको छ । कस्ले बनायो कहिले बनायो
घरमा पीपल उम्रिनु शुभ कि अशुभ ? जान्नुस
हाम्रो जीवनमा जनस्पतिहरुको धेरै महत्व छ । त्यसमा पनि पीपलको महत्व त धेरै रहेको छ । किनभने अन्य वनस्पतिको तुलनामा हामीलाई पीपलले अक्सिजन धेरै दिन्छ । साथै हिन्दू धमर्ममा पीपललाई भगवान विष्णुको अवतार मानेर पूजा गर्ने गरिन्छ । साथै पीपलले हामीलाई मात्र होइन सारा वातावरणलाई पनि सफा बनाउँछ । वास्तुशास्त्रका अनुसार यदि रुहहरु घरमा उम्रिएमा एकदमै शुभ र सुख समृद्धि आउने विश्वास गरिन्छ । साथै पीपलको रुख घरमा उम्रिनुलाई भने अशुभको प्रतिक मान्ने गरिन्छ । पीपलको छायाँले शीतलता प्रदान गरेपनि घरमा पीपल उम्रिँदा निर्जनता पैदा हुन्छ । नयाँ समस्याको समाधान गर्नका साथै विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी हाम्रो समाजमा पिपलको पूजा गरिन्छ । धार्मिक विश्वासअनुसार लक्ष्मीको श्रापका कारण विष्णु भगवानले एकपटक वनश्पती बन्नु परेको थियो । जहाँ उनी पिपल बनेर जमिनमा उम्रिएका थिए । तर वैज्ञानिक दृष्टि
बिहे अघि स’ म्पर्क भएको छ छैन , यी पाँच परिवर्तनबाट थाहा हुन्छ !
पुरा खबर, यo, न जीवन कुनै पनि स’ म्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। इ’ मोसनका साथै जोडीबीचको सम्ब’ न्धलाई समेत प्रभावित पार्छ। तर, यसको असर यसैमा अन्त्य हुँदैन। यo’ न सम्बन्ध सुरु गरेपछि युवतीहरूको शरी’ रमा केही परिवर्तन देखिन्छ। हर्मो’ नमा परिवर्तन सe’ क्सपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको श’ रीरमा अ’ क्सिटो’ सिन र डोपा’ माइन हर्मोन उत्पादन हुन्छ। यसले महिलाको इ’ मोसनका साथै व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। यो असर केही समयका लागि नभएर विस्तारै विस्तारै व्यक्तित्वमा समेत असर पार्छ। आत्मविश्वास यo’ न सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलाहरू आफ्नो शरीरलाई लिएर आ’ त्मवि’ श्वास पनि बढ्छ। यo’ नसाथीले महिलाका हरेक कुरालाई प्रेम गरेमा महिलामा बढी आत्मविश्वास पैदा हुन्छ। स्तm’ नको फर्म र आकार यo’ न सम्बन्धपछि महिलाको स्त’ नको आकार बढ्न थाल्छ। यस्तो ह’ र्मो’नमा आउने परिवर्तनका कारण हुन्छ। तर, सबैमा यस्तो हुन्